6 dhaqan oo Soomaalida ku badan oo dhibaato wayn u gaysan kara KELYAHAAGA (Fadlan akhri) | Hadalsame Media
Home Caafimaadka 6 dhaqan oo Soomaalida ku badan oo dhibaato wayn u gaysan kara...
6 dhaqan oo Soomaalida ku badan oo dhibaato wayn u gaysan kara KELYAHAAGA (Fadlan akhri)
(Hadalsame) 14 Juun 2021 – Killiyahaada Badbaadi (Save your Kidneys). Halkan ka akhri moowduuc kale…
Waxaa sara u kacay dadka da’yarta ah ee la il daran xanuunada asiibada kliyaha.
taaso oo loo sababeeyo arima kala duwan oo halis galin karo inaad weyso xubnaha ugu muhiimsan noloshadaaada.
Halkaan waxaan kuugu soo gudbin doonaa 6 waxyabood oo khatar weyn ku ah kiliyahaada.
(1) Kaadida oo leesku celiyo am aad ka wehsato inaad suuliga aaado.
Arrintaan ayaa sabab u noqoto in kaadi heestaado dhaafto xadka keydinta taasi oo sababta in bacteriada ku jirto kaadida si dhaqsi ah isku badiso sababtana caabuq kaasi oo dib ugu laabta kliyaha kaanena xlad loo yooqaan #pyelonephritis oo ah infections daran oo kaa asiiba kilyaha.
(2) Cusbada badan.
Ha ka qaadan cusbada wax ka badan 5.8 gm maalintii. waa khatar kale oo kuu qarsoone.
(3) Ha cunin hilib badan Hilibka aya ka kooban proteins xajmi adag. Markii jirku shiidaayo proteins ka waxaa la soo dayaa maado loo yaqoon #ammonia taasi oo halis galisa shaqada kilyahab sababtana dhaawacyo daran oo kilyaha ah.
Hilib badan = dhawaac badan ee killidaaada.
(4 ) Cabidda coffee ga badan
coffee ga ayaa sara u qaada xadiga cadaadiska dhiiga iyo shaqa kilyaha kaasi oo sababa u noqon karo in kilyahaado shaqada yareeyaan..
(5) Biyo cabidda oo yar.
Kliyaha ayaa u baahan iney helaan biya kufilan si ey shaqadooda si caadi ah ugu qabsadaan hadii aadan biya badan cabin sunta iyo wasaqda jirka kale laga so saaro ayaa ku aruuri doona kilyahaaada kadibna usiigudbi donta dhiiiga waxana ka dhasha xaalad adag oo loo yaqaan #uremia kadida iyo dhiiga oo si dhax gala….
Waxaad u bahnatahy malintii inaad cabto 8 galaas oo biyaha saafigaa ah..
Si aaad u hubiso inaad biya kugu filan cabtay fiiri midabka kaadidada ma cadaaan saafi ah baa misa waa midab qasan oo calaw ah…
6) haka caajisin inaad hubiso caafimaadka kliyahaada 6 dii bilba mar jeer booqo dhaqtarka si aaad ula socoto kilyahaaada bad qabkooda.
Ka fogooow daawooyinkaan hana qaadan waligaa waa dilaaga kilyahaada.
Dhaqaatiir u dhaltay wadanka Germany ayaa ogaaday nuuc cusub oo ah kansarka maqaarka ku dhaco kaasi oo laga qaado maadada loo yaqaan Silver Nitro Oxide.
Madaadaan ayaa laga helaa cijiyaha qofka hadii aad dareento cun cun jirka haku xoqin maqaarka cijiyahaaada.
Fadlan nagu soobiir hadaad nagu cusub tahay si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee ka faaiidaysta talooyin caafimaad aan soogalino pageka #follow #like mahadsanid
Waxaa Diyaariyey: Dr Axmed
Previous articleTOOS u daawo: Netherlands vs Ukraine – LIVE (Shaxda Sugan)
Next article”Waa laga tegey xilligii ay koox yari dunida maamulayeen!” – Shiinaha oo furka ku xooray una digey G7